Lacagtii "UN Peacebuilding Fund" oo laga soo wareejiyay DFS, toosna loo siinayo Dowlad Goboleedyada - Muqdisho Online
Home Wararka Lacagtii “UN Peacebuilding Fund” oo laga soo wareejiyay DFS, toosna loo siinayo...
Lacagtii “UN Peacebuilding Fund” oo laga soo wareejiyay DFS, toosna loo siinayo Dowlad Goboleedyada
Hay’adda Qaramada Midoobay iyo Dowlada Fedaraalk ayaa waxa ay horay u wada sameeyeen sanduuq lacageed oo lagu magacaabo UN Peacebuling Fund. Lacagtaa ayaa waxa maamulkeeda lahaa Dowaladihii Fedaraalka iyada oo wadatashi lagala sameeynayay Hay’dda Qaramada Midoobay oo lacagtaas maamusha.
Lacagtaan oo inteeda badan loogu talagalay in lagu caawiyo Dowladda Fedaraalka iyo Dowlad Goboleedyada ayaa markii ugu horeeysay waxaa ay Hay’dda Qaramada Midoobay iyo Wadamada lacagta ku shuba sanduuqa isla garteen in si toos lacagtaas loogu qaybiyo Dowlad Goboleedyada soo buuixiya sharuudaha bixinta lacagataas.
Talabadaan ayaa waxaa ay muujineysaa in Qaramadda Midoobay go’aansatay in ayan lacag si toos ah ugu aaminin Dowladda Fedaraalka.
Dhowr bilood ka hor ayaa qaybtii ugu horeeysay lacagtaas waxa la siiyay dalka la magac baxay Somaliland. Waxaa dowladaas lagu wareejiyay $2.5 Milyon halka loo balan qaaday in lacag kale la siin doono mar dhaw. Dhanka kale Puntland iyo Jubbaland ayaa iyagana loo bilaabayaa lacagtaas.
Wasaaradda Arimaha Gudaha ee Dowladda Fedaraalka ayaa waxa laga caawiyaa shirar lagu sheegay dib u heshiisiin qaran oo Muqdisho lagu qabtay iyo tababaro kuwaas oo qarashka ku baxa laga bixiyo sanduuqaan. Sidoo kale waxaa sanduuqa laga bixiyaa qarashaadka safarka ee Wasiirka Arimaha Gudaha isaga oo qoraal codsi ah u qorayo Qaramada Midoobay.
Sanadkii 2015/16 Lacagta ku jirtay sanduuqaas waxaa si toos ah loogu wareejiyay dowlada Fedaraalka, sidoo kale waxa dowladaas toos looga caawiyay dhismaha Dowlad Goboleedyada.
Dowladda Fedaraalka ayaa sii luminaysa kaalmada beesha caalamka ha noqoto tii lagu taakulaynayay ciidanka ama tan sida tooska ah loogu deeqayo dowlada. Talabadaan ayaa ah fartiin si dadban loogu dirayo hogaanka Farmaajo kaas oo ah in uu sameeyo isbadal soo celin kara kalsoonida beesha caalamka.
Previous articleWasiir Juxa”Goodax waxbarashada Puntland waa in uu faraha kala baxo”
Next articleCiidamo loo diyaariyay Kacdoonka Shacabka oo Muqadisho lagu soo badhigay